Miaraka amin'ny plugin AMP for PHP dia afaka mamorona pejy Google AMP ho an'ny tranonkalanao mora foana ianao, mandeha ho azy tanteraka.
Torohevitra iray alohan'ny hanombohanao mametraka ny plug-in PHP-AMP: Ho an'ny vahaolana CMS sasany, amp-cloud.de dia manolotra plug-in Google AMP manokana izay mora kokoa noho ny mametraka sy mitantana! - Ho solon'ny "plug-in" AMP for PHP " , ny iray amin'ireto plug-in Google AMP manaraka ireto dia mety hahaliana anao:
Ampidino ny kinova "AMP for PHP Plugin" amin'izao fotoana izao ho rakitra ZIP avy amin'ity rohy fampidinana manaraka ity. - Ny rakitra ZIP dia misy lahatahiry antsoina hoe "amp" izay misy ny rakitra rehetra ilaina amin'ny fametrahana sy fampiasana ny plug-in AMP.
Dingana-2: esory ny rakitra "AMP for PHP Plugin" -ZIP
Unzip / esory ny fisie ZIP alaina.
Aorian'ny famoahana / famoahana dia tokony hanana "folder" miaraka amin'ny anarana "/ amp /" izay misy ireo rakitra plugin PHP-AMP.
Ampidiro ao anaty lahatahiry root an'ny mpizara tranonkala ny fampirimana tsy misy zip misy ny anarana hoe "/ amp /" mba hahatratrarana ilay fampirimana ao amin'ny tranonkalanao ambanin'ity URL manaraka ity:
Mba hitsapana raha toa ka voatahiry tsara ao amin'ny mpizara tranonkala ilay fampirimana dia antsoy fotsiny ity URL manaraka ity - raha marina ny fametrahana azy dia tokony hahita hafatra milaza ianao fa mampiasa ny plug-in AMP avy amin'ny amp-cloud.de ny tranokalanao. raha tsy izany tsy tafapetraka tsara ny plugin ary tokony hamaky ireo dingana etsy ambony indray ianao:
Farany, ampidiro ny fanosehana ny fototra tsirairay, izay tianao hanome ny kinova AMP, amin'ny fampiasana ny iray amin'ireto variana ireto a <link rel = "amphtml"> - andro iray ao amin'ny fizarana <lohany> amin'ny fototra mifandraika amin'izany.
Raha te hanakodia URL araka ny tokony ho izy dia azonao ampiasaina ireto encoder URL an-tserasera maimaim-poana ireto, ohatra: https://www.url-encode-online.rocks/
Ohatra iray amin'ny URL voahodidin'ny UTF-8:
Ohatra iray amin'ny URL voamarikao UTF-8:
Fa maninona no ampiasaina ny plugin AMP PHP?
Ny plugin AMP ho an'ny PHP ofisialy avy amin'ny amp-cloud.de dia mampihetsika ny pejin'ny finday haingana (AMP) amin'ny tranokalan'ny PHP anao, eo ambanin'ny mpampiantrano anao manokana, araka ny tolo-kevitr'ireo torolàlana momba ny fampiantranoana AMP Google!